टाइपोग्राफी संयोजन | अनलाइन क्रिएटिभहरू
एनकर्नी आर्कोया | | मा अद्यावधिक गरियो 31/03/2022 23:41 | प्रेरणा
धेरै अवसरहरूमा हामीले तपाईंलाई भन्यौं कि डिजाइनहरूमा धेरै फरक फन्टहरू प्रयोग गर्नु राम्रो होइन, किनकि यसले दर्शकलाई पूर्ण रूपमा गुमाउँछ। तर यो दुई स्रोत हुन सक्छ। तर, फन्ट संयोजन कसरी बनाउने? के दुई एकदमै फरकलाई एकै ठाउँमा मिसाउन सकिन्छ? नियमहरू पालना गर्नुपर्छ?
यो विषयले तपाईलाई चासो दिन सक्छ कि तपाई ग्राफिक डिजाइनर हो वा केवल एक लेखक हो, किनकि यसले तपाईलाई कुञ्जीहरू दिनेछ कि उत्कृष्ट संयोजनहरू के हुन् भनेर जान्नको लागि पाठ वा परियोजना उत्तम देखिन्छ। त्यसको लागि जानुहोस्?
1 फन्टहरू संयोजन गर्दा तपाईंले के मनमा राख्नु पर्छ
1.1 पाठको पङ्क्तिबद्धता र पढाइ जाँच गर्नुहोस्
2 टाइपोग्राफी संयोजनहरू जुन हिट छन्
2.1 मोन्टसेराट र कुरियर नयाँ
2.2 लिग स्पार्टन र फ्री बास्करभिल
2.3 निक्सी वन र ल्याटो लाइट
2.4 जोसेफिन स्लैब र फौना वन
2.5 व्यापार गोथिक र सबोन
फन्टहरू संयोजन गर्दा तपाईंले के मनमा राख्नु पर्छ
तपाईलाई फन्ट संयोजनको उदाहरण दिनु अघि, हामी तपाईलाई दुईवटा कुरा दिमागमा राख्न चाहन्छौं।
पहिलो हो कि तपाईंले एउटै पाठमा2भन्दा बढी फन्टहरू जोड्नु हुँदैन। कारण यो हो कि तपाइँ स्पेस धेरै ओभरलोड गर्नुहुन्छ, र त्यो मात्र होइन, तर तपाइँ दर्शकको चासो गुमाउनुहुन्छ।
उदाहरणका लागि, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंसँग आवरण छ। तपाईंले फन्टको साथ शीर्षक राख्नुहुन्छ; अर्कोसँग उपशीर्षक। र लेखक अर्कोसँग। के तपाईलाई लाग्छ कि तिनीहरू समान छन्? परियोजना के समावेश छ? सबैभन्दा सुरक्षित कुरा यो हो कि यो गर्दैन, जसको मतलब यो देख्ने प्रयोगकर्तालाई के आशा गर्ने थाहा छैन।
साथै, विभिन्न फन्टहरूले यसलाई धेरै अव्यवस्थित बनाउन सक्छ। त्यसैले, यो जहिले पनि अधिकतम दुई फन्ट परिवर्तन गर्न राम्रो छ।
तपाईंले नियन्त्रण गर्नु पर्ने दोस्रो पक्ष भनेको फन्टका प्रकारहरूसँग सम्बन्धित छ। यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, त्यहाँ विभिन्न फन्टहरू छन् जुन तपाईंले संयोजन गर्दा विचार गर्नुपर्छ। तपाईंलाई एउटा विचार दिन, तपाईंसँग छ:
सेरिफ: यो एक टाइपोग्राफी हो जुन अक्षरको अन्त्यमा सानो फिनिश भएको विशेषता हो। यसलाई अत्यधिक सजावटको रूपमा हेर्नु हुँदैन, तर यो सानो पनि हुन सक्छ। यो एक गहना जस्तै हो जुन यसलाई लगाएको छ।
Sans serif: यदि हामीले तपाईलाई भन्यौं कि अक्षरहरूमा एक आभूषण थियो, यस अवस्थामा यस प्रकारको फन्टमा यो कमी छ, सरल हुनु।
लिपि: हस्तलिखित टाइपफेस पनि भनिन्छ। यो एक टाइपफेस हो जुन हातले लेखिएको जस्तो देखिन्छ, फलफूल र विशेष विवरणहरू सहित।
स्ल्याब सेरिफ: यो एक प्रकारको टाइपफेस हो जुन बाक्लो, ब्लकी सेरिफ (अलंकार) द्वारा पहिचान गरिन्छ।
पाठको पङ्क्तिबद्धता र पढाइ जाँच गर्नुहोस्
अर्को पक्ष जुन धेरै थोरैले खातामा लिन्छ, र टाइपोग्राफी संयोजनहरू छनौट गर्दा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, पाठको पङ्क्तिबद्धता साथै यसको पढाइ हो।
हामी पङ्क्तिबद्धताको साथ सुरु गर्छौं, त्यो हो, यदि पाठ बायाँ, दायाँ, केन्द्रमा पङ्क्तिबद्ध वा न्यायोचित पढ्न जाँदैछ। यस आधारमा, प्रयोग गरिने फन्ट फरक हुनेछ, किनकि सामान्य रूपमा, र यस अवस्थामा हामी ग्राफिक डिजाइनहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं, यसको वरिपरि केही सजावट राखिनेछ।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ पाठको पढाइ हुनेछ, अर्थात्, यदि यो बायाँबाट दायाँ, दायाँबाट बायाँ वा ठाडो हुन जाँदैछ। पछिल्लो अवस्थामा, फन्ट छनोट गर्नु जुन राम्रोसँग पढ्न सकिन्छ र तपाईले शब्दलाई नदेखेर पढ्न अनुमति दिनुहुन्छ तपाईले यसमा राख्नु भएको सजावट भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ।
टाइपोग्राफी संयोजनहरू जुन हिट छन्
हामी पनि व्यावहारिक हुन चाहन्छौं र तपाईंसँग फन्ट संयोजनहरूको उदाहरणहरू हुन सक्छन्, यहाँ केही विचारहरू छन् जुन काममा आउन सक्छ।
मोन्टसेराट र कुरियर नयाँ
मोन्टसेराट फन्ट एउटा हो जसको बारेमा हामीले तपाईंलाई अन्य अवसरहरूमा भनेका छौं किनभने यो हेडलाइनहरू र हेडलाइनहरू बनाउनको लागि उत्तम मध्ये एक हो। त्यसैले हामीले यसको साथ सुरु गरेका छौं।
यो यसको अक्षरहरूमा पूर्ण-शरीर र गोलाकार फन्ट भएको विशेषता हो। यो बाक्लो छ।
यस कारणको लागि, यो संग संयोजन गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो एक नरम, हल्का स्ट्रोक संग एक हो। हामीले कुरियर नयाँ छनोट गरेका छौं किनभने यो टाइपफेस हो जुन टाइपराइटर जस्तो देखिन्छ तर यसले सम्पूर्ण कुरालाई हाइलाइट गर्दछ। तर यदि तपाइँ त्यो चाहनुहुन्न भने, तपाइँ हस्तलेखन टाइपफेस (जसले हस्तलेखन सिमुलेट गर्दछ) छनोट गर्न सक्नुहुन्छ जुन सुपाठ्य छ र धेरै रमाइलो छैन। वा टाइम्स न्यू रोमन फन्ट पनि।
लिग स्पार्टन र फ्री बास्करभिल
यहाँ हामीसँग अर्को उदाहरण छ जुन अघिल्लोको लय पछ्याउँछ। त्यो भन्नको लागि, हामी हेडर वा शीर्षकको रूपमा बाक्लो फन्ट राख्छौं, जस्तै लीग स्पार्टन (जुन सेन्स सेरिफ हो) र पाठको लागि फन्टको रूपमा हामी लिब्रे बास्करभिल प्रयोग गर्छौं, जसमा तपाईले सानो गहनाहरू देख्नुहुन्छ तर यो ठीक छ, धेरै सुपाठ्य। र यसले अघिल्लोसँग राम्रो कन्ट्रास्ट बनाउँछ।
हेडर उपशीर्षकहरूको लागि पनि तपाईले ठूलो साइजमा Libre Baskerville प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
निक्सी वन र ल्याटो लाइट
यस अवस्थामा हामी तपाईंलाई टाइपोग्राफिक संयोजनहरूको अर्को उदाहरण दिनेछौं जुन काममा आउन सक्छ। र यो हो कि दुबै हल्का हुन सक्छ, तर यदि तपाईले हेर्नुभयो भने, तिनीहरू एकअर्का भन्दा फरक छन्।
एकातिर, हामीसँग Nixie One छ, एक प्रकारको सेरिफ फन्ट जुन हामीले शीर्षकको रूपमा खडा बनाउन सबै क्यापहरूमा राख्छौं। अर्कोतर्फ, तपाईंसँग ल्याटो लाइट छ, जुन सेन्स सेरिफ हो र यसले सुन्दर र हल्का डिजाइन सिर्जना गर्न प्रबन्ध गर्दछ।
वास्तवमा दुबै फन्टहरू हल्का छन्, तर अक्षरहरू बीच अलि बढी ठाउँ भएको पाठले यसलाई थप स्पेस र पढ्न योग्य हुन अनुमति दिन्छ। जबकि शीर्षकमा सबैभन्दा बढी संलग्न अक्षरहरू छन् र अलि बढी रिचार्ज गरिएको छ।
जोसेफिन स्लैब र फौना वन
Josefin Slab सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने अक्षर फन्टहरू मध्ये एक हो, विशेष गरी शीर्षकहरू र लोगोहरूको लागि पनि किनभने यसले धेरै ध्यान तान्छ र धेरै रोचक प्रभाव प्राप्त गर्दछ। थप रूपमा, यद्यपि यो जस्तो लाग्दैन, फिनिशहरू बलियो छन्।
त्यसोभए, तपाईंले एक टाइपफेस छनोट गर्नुपर्नेछ जसले सम्पूर्णलाई नरम बनाउँछ, र यसका लागि तपाईंले Fauna One लाई रोज्न सक्नुहुन्छ, तर हामी नुनिटो लाइट वा Merriweather लाई पनि सुझाव दिन्छौं जुन समान छन् र त्यो प्रभाव प्राप्त गर्दछ।
यस अवस्थामा, पाठको लागि सेरिफ फन्ट छनोट गर्नुको सट्टा, हामीले यसलाई हेडलाइनको लागि छनोट गरेका छौं, यसरी कि हामी प्रयोगकर्ताको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित गर्छौं र, पछि, यसलाई sans श्रृंखला टाइपफेससँग जोड्दछौं, पढ्न सजिलो हुन्छ र हेडलाइनको भन्दा सहज स्ट्रोकको साथ सम्भव छ।
अब जब तपाइँ फन्ट संयोजनहरू जान्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको डिजाइन वा परियोजनाहरु को लागी बिभिन्न फन्टहरु कसरी छनौट गर्ने भन्ने बारे एक विचार हुन सक्छ। तपाईं फन्ट को कुनै अन्य सेट को बारे मा सोच्न सक्नुहुन्छ? टिप्पणीहरूमा हामीलाई छोड्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » टाइपोग्राफी संयोजन
हेल्भेटिका नवीकरण गरिएको छ र जन्मिएको छ, हेल्भेटिका अब